भाषण अखरोट | जेपीएमए, इंक
हामी यो जान्न सजिलो बनाउँछौं तपाईंको बच्चाको खानामा के जान्छ।
भाषण-नट® मा, हामी पौष्टिक, महान स्वाद, बच्चाहरु को लागि वास्तविक खाना बनाउन समर्पित छौं। हामी 75 भन्दा बढी भन्दा बढी बालबालिकाको लागि खाना बनाइरहेका छौं हाम्रो मुख्यालयमा न्यु योर्कको हृदयमा स्थित। हामीसँग हाम्रो आफ्नै आफ्नै परीक्षण भान्सा छ जहाँ हामी हाम्रो खाना स्वाद दिन्छौं कि यो स्वस्थ र स्वादिष्ट छ। यो हाम्रो उत्पादनको शुद्धता र सादगी हो जसले हामीलाई पोषणशील खाना छनोटहरू प्रदान गर्ने गर्दछन् जसले बच्चाहरूको विकास र विकासलाई समर्थन गर्दछ।
आमाहरू जान्छिन् कि बच्चाहरु लाई अति-प्रसोधित, ओवरकोड वा पानी पिउन आवश्यक पर्दैन। यसैले हामी हाम्रो पोषक पुष्प प्रस्तावित गर्व गर्यौं, वास्तविक फल र सब्जिहरु संग WIC ™ कार्यक्रमका परिवारहरूमा बस बनाइयो। के तपाईंसँग प्रश्न छ? हेल्पलाइन (1-800-233-2468) सोमवार देखि शुक्रबार खुला छ, 8a.m.- 5p.m। EST।
केहि चरणहरू यो हाम्रो नयाँ जारहरूमा जान तयार खाना बनाउन लिन्छ।
कष्ट घटाउनुहोस् र नयाँ मूल्य सिर्जना गर्नुहोस् प्यारा र उपयोगी वस्तुहरूमा तपाईंको बच्चाको खाना जार माथिको माथि बढ्दै!
गुवा, नाशपाती र स्ट्राबेरी शुद्ध
केला, ओरेंज र अनानास Purée
बीट्स, नाशपाती र अनार शुद्धता
यो सेब र कद्दू पनीले पतनको क्लासिक स्वादमा एक मजाक मोडिन्छ
केला, ब्लुबेरी र ग्रीन बीन Purée
मीठो मक र हरियो बीन शुद्ध
ब्लुबेरी समर क्रुर
यो ब्लुबेरी समर क्रुसर ताजा ग्रीष्मको ब्लुबेरी, स्ट्रबबेरी र सब्जनीको निचोड शुभकामनात्मक मुक्त फ्रिबल र व्हाइड नारियल क्रीमको एक गुडियाप संग सबै फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। पुरा परिवार द्वारा एक स्वादिष्ट मिठाई छ!
नाशपाती काल र ककम्बर पुरी
एप्पल र कद्दू शुद्ध
नाशपाती, केले र ककम्बर पुराई
केला रोटी पुरी
बच्चाको लागि न्यानो र मसाले भरिएको भित्ताले वास्तविक चीज जस्तै स्वाद दिन्छ - ताजा केला रोटी! यो अस्पष्ट पनी पोटेशियम, फाइबर र तपाईंको बच्चाको लागि आवश्यक भिटामिन देखि भरी छ।
मटर, हरियो बीन्स र एस्पेरपस शुद्ध
एप्पल, कीवी र स्पिनच पुराई
आम, एप्पल र एवोकोडो प्यूटी
केला, नारंगी र अनानस शुद्ध
आफ्नो बीउ छर्ने
स्पाइस मिश्रणहरूको लागि माथिको बच्चाको खाना जार